ट्राफिक छैन भनेर जथाभावी सवारी नियम मिच्नुभएको छ ? होशियार घरमै प्रहरीको चिठी आउला – Etajakhabar
ट्राफिक छैन भनेर जथाभावी सवारी नियम मिच्नुभएको छ ? होशियार घरमै प्रहरीको चिठी आउला
काठमाडौँ- तपाईले जथाभावी ट्राफिक नियम उल्लंघन गरी सवारी साधन चलाइरहनु भएको त छैन ? ट्राफिक प्रहरी अगाडि छैन भनेर नियम उल्लंघन गर्नुभएको भए अब कारबाहीमा पर्नुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण ०२, २०७४ समय: १५:४९:१४